Iindlela zokufota ezivela kwixesha elidlulileyo ezinokuphinda zenziwe kwakhona | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iindlela zokufota ezivela kwixesha elidlulileyo ezinokuphinda zenziwe kwakhona ngoku
UJorge Neira | | Ukufota
La umfoti uJoni Sternbach Uyaziwa ngemifanekiso yakhe yabahambi ngenqanawa esebenzisa ubuchule benkulungwane ye-XNUMX.
Usebenzise zombini ifomathi enkulu kunye nezinye izixhobo eziphambili zokwenza iifoto ubume bemihla kunye nemizobo, njengenkqubo yeplate emanzi, ngale ndlela, iyakwazi ukuthatha imifanekiso yanamhlanje enomoya wakudala.
Ngaphandle koku, uJoni Sternbach Ayinguye yedwa onomdla kwiindlela zamandulo ukufota, njengoko nathi kufuneka sithethe ngoAdam Fuss, omnye umfoti oqeqeshiweyo. Kule meko, wenza uvavanyo nge iinkqubo zokufota ngesiqhelo kwaye ngezihlandlo ezithile inokuphelisa ukusetyenziswa kwekhamera.
Ngale ndlela, umsebenzi wabo wahlukile ngenxa ye- Ukutolikwa okwangoku kwezo ndlela zokuqala zokufota, phakathi kwazo iindlela ezingadingi khamera kunye nangoku. Kwelinye icala, enye ingcali ekhetha ukusebenzisa ubuchule bokufota ukusuka kwixesha elidlulileyo elinokuphinda lenziwe kwakhona ngoku umfoti uRichard Learoyd, ukhethe ntoni imifanekiso yemibala usebenzisa enye yezona zixhobo zakudala zokufota ezaziwa njengecamera obscura.
Ababini ngaphezulu ukujoyina ezi abayili abakhulu NguWalter noZoniel, abakwaziyo ukujika Indawo yaseSomerset kwigumbi elikhulu elimnyama. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ngaphandle kokuba yenye ye ubuchule bokuqala bokufotaIkwayenye yezona zisetyenziswa kakhulu namhlanje.
Yiyo ubuchule obenziwe ngokwenziwa kwegumbi elilingana negumbi okanye igumbi elimnyama, le iyindawo apho, umzekelo, uLearoyd enza iikopi ezithe ngqo ngokuveza amaphepha amakhulu ephepha lokukhanya. Ke, iphepha ngalinye licutshungulwa ngokwahlukeneyo ukwenza umfanekiso ongenazinkozo ngokupheleleyo.
Kwindawo yokufota, kukho amagcisa athe akhetha ubuchule bokufota bexesha elidlulileyo ezinokuphinda zenziwe kwakhona okwangoku ukuze zikwazi ukwenza imisebenzi yazo. Umzekelo woku nguChristian Marclay, ngubani yakha eyakho ifomathi yekhamera enkulu kwaye ke isebenza nephepha lesilivere le-gelatin.
UAlison Rossiter lelinye igcisa elisebenza kunye nemifanekiso ngaphandle kokusebenzisa ikhamera, ukusukela oko sebenza iphepha lokufota engasetyenziswanga ngokusetyenziswa ngokudibeneyo komvelisi wolwelo ngokuthe ngqo kumphezulu okanye nangokuntywila amashiti kumakhi, okwenza imifanekiso ingabonakali.
I-tintype yasungulwa ngo-1800 kwaye yayiyenye yeefayile ze- ubuchule bokufota Baye bakwazi ukwenza ukuba phantse wonke umntu abe nethuba lokwenza umzobo wabo. Iindidi zokuqala zazakhiwe kwizinyithi, ke ngoko zazinexabiso eliphantsi kwaye zinako yenza abafoti babe nakho ukunika iifoto esitratweni.
Ukufota ayisiyonto intle, kuba kule mihla iifowuni eziphathwayo zinekhamera efakwe kwimisebenzi yazo. Nangona kunjalo, ngaphandle kwenkqubela phambili esele yenzekile kwi- ubuchule bedijithaliKusekho abantu abasenomdla kwiinkqubo ezindala zokufota.
Inkqubo esetyenzisiweyo kwaye isasetyenziswayo yile ichazayo ikopi yezinto ezingalunganga kwaye ukuba namhlanje iteknoloji yenza ukuba kube nakho ukwenza izinto ezingalunganga ngaphandle kokusebenzisa igumbi elimnyama.
Ngaphambi kokuba wenze nayiphi na kwezi ubuchule bamandulo umfanekiso olungileyo uyimfuneko, emva koko unike olo hlobo lubalulekileyo kwiifoto. Kwimeko apho abanye abantu bafuna ukuzisebenzisa, zikhona iilensi ezikhethekileyo ezinokuhlengahlengiswa kwiifowuni eziphathwayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukufota » Iindlela zokufota ezivela kwixesha elidlulileyo ezinokuphinda zenziwe kwakhona ngoku
Uyila njani? Ngesandla okanye ngomatshini?
Phinda ubeke iifoto zakho zeholide ngaphandle kokuba ube yingcali kwi-Photoshop